WOWOW 8 In. Ukusasazeka kwe-2-Handle Chrome ye-Bathroom Faucet
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukusasazeka kweeMpompo zegumbi lokuhlambela / WOWOWU 8 ungene. I-2-Handle Bathroom Faucet kwi-Chrome
WOWOW 8 Ngo. Itafile yokuhlambela kwigumbi lokuhlambela eliphethe i-2
Amazon US I-Amazon MX Umyalelo woFakelo lwePDF
Ayizange iphelelwe lixesha:Impompo yokuhlambela yesilivere kwisibuko esifana ne-chrome, isitayile samampunge esigqwesileyo, yenza igumbi lakho lokuhlambela libe liphezulu
UKUFAKA NGOKUKHAWULEZAYO: Ulwakhiwo olulodwa oludibanisa ngokukhawuleza olukhawulezayo, amanzi ashushu nabandayo anokuxutywa ngombhobho wofakelo olukhawulezayo ngaphandle kwe-wrench, ngobuchule bokuthintela ukugqabhuka kombhobho.
IZIPHATHA ezi-2 AMAQEPHU ama-3 EENKONZO ZESIBINI EZANZILEYO: umqheba ophindwe kabini, uyilo lweziqwenga ezi-3 lulungele ulawulo oluchanekileyo kuzo zombini umthamo kunye nobushushu bamanzi, nendawo yofakelo inokulungiswa
UYILO OLUHLUNGILEYO OLUNIKAZI: 4 -16” iitepu zokuhlambela ezinabileyo ezinemingxunya emi-3, umgama wokufakela unokulungiswa ngokweemfuno, ilingana nendlu yerenti, i-condo entsha, igumbi elinye, ikhaya lemoto, itreyila yokuhamba, kunye nokusetyenziswa kosapho.
ISIQINISEKISO, INKXASO YABATHENGI: Iwaranti yeminyaka emi-3 kunye nenkxaso yabathengi inikezelwa. Igutyungelwe kukubuya kweentsuku ezingama-90. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi.
Igumbi lokuhlambela igumbi lokuhlambela chrome 2 isingatha 2320300C
Isikhuselo sendlela yokuhlambela ngokubanzi sinika uchukumiso lobuhle bayo nayiphi na igumbi lokuhlambela. Olunye uncedo olukhulu lwendlu yokuhlambela ebanzi ebambeleyo 2 kukuba uyakwazi ukudibanisa ukuhamba kwamanzi ngokwezifiso zakho. Isikhupheli sokucoca igumbi lokuhlambela esine-2 likuvumela ukuba ulawule amanzi ashushu nabandayo ngokukodwa, kubandakanya ukuhamba kwawo. Ngenxa yoko, awusoze wenze impazamo kwakhona kwaye uchithe amanzi ashushu ngelixa ungawafuni. Okanye okubi kakhulu, ukutshisa izandla zakho ngamanzi ashushu. Ke ngoko igumbi lethu lokuhlambela igumbi lokuhambisa i-chrome 2 isisombululo esihle kwaye sikhuselekile kwigumbi lakho lokuhlambela.
Ibhobho yokuhlambela ephezulu ye-arc enoyilo olukhethekileyo lwe-7, ngokuqinisekileyo inika indawo ekhethekileyo kuyo nayiphi na indlu yangasese. Abaqulunqi be-WOWOW baziwa ngokubanzi ukuba bahlala bekhangela uyilo olunesibindi ukuze benze umahluko kwiipompo zayo zangasese. Ngenxa yoko, iipompo zangasese ze-WOWOW zihlala zihluke kancinci kwezinye iifompo zangasese oza kuzifumana. Oko kukunceda ukuba unike indlu yakho yokuhlambela okhethekileyo kwaye wahlukile. Eli nqaku likhethekileyo uya kulifumana kwifayile ye- chrome yangasese faucet Izibambo ezi-2 zeWOWOW. Le faucet yokuhlambela ngokuqinisekileyo iya kunika uhlaziyo olukhulu kwigumbi lakho lokuhlambela.
Ukufaka igumbi lokuhlambela itawuli chrome 2 izibambo
Ukufakelwa igumbi lokuhlambela isuntswana lezahlulo ezi-2 uya kudinga isixhobo sokuhlambela esinemingxunya emi-3. Ngokubanzi, imingxunya ebekelwe ngaphambili kwezi zibambo zimbini ibekwe kwii-intshi ezi-4 ukusuka kwiphenyane uqobo. Kodwa unokukhetha umgama ngokwawo ukuba awunaso isinki sokuhlambela sangasemva. Izibambo zinokubekwa kwi-4 tot 16 inched ukusuka kwi-faucet ngokwayo. Kuxhomekeke kuwe ukuba uthathe isigqibo sokuba mgama ngowuphi na. Ukufaka izibambo udinga nje imingxunya emibini eyongezelelweyo ye-1 ukuya kwi-1,5 ye-intshi. Ubunzima bepeyinti yedesika bunokufikelela kwi-1,2 inches.
Igumbi lokuhlambela le-WOWOW igumbi lokuphatha i-2 iipiyeli zenziwe ngendlela eyahlukileyo yokuhlanganisa. Amanzi ashushu nabandayo angafakwa ngonxibelelwano olukhawulezayo ukufaka ngaphandle kokusebenzisa isirinji. Ngenxa yale ndlela yokudala, uya kuthintela imibhobho yamanzi yokuqhuma. Le faucet yegumbi lokuhlambela iza nepakeji epheleleyo yokufakelwa, kubandakanya iseti yemibhobho yokuqhagamshela ngokukhawuleza kunye neendlela ezongeziweyo zokuhambisa amanzi. Ngale khithi yokufaka uya kuba nakho ukufaka eli gumbi lokuhlambela itawuli chrome 2 ngesandla sakho ngaphandle kokuqesha iplaki. Uya konga kakhulu ekufakweni kweendleko ngokulandela ividiyo elula yokufaka ye-WOWOW. Ukufakwa kunokwenziwa kwimizuzu engama-30 ngaphandle kwengxaki. Ngaba akukho lula oko?
Uyilo lokucoca ifestile yokuhlambela chrome 2 izibambo
Igumbi lokuhlambela igumbi lokuhlambela chrome 2 liphatha uyilo olucwangcisiweyo olunomphezulu ocekeceke oya kujongeka umhle phantse kuso nasiphi na isitayile segumbi lokuhlambela. Izixhobo zokuphatha ezimbini zensimbi zikunika ulawulo olulula. I-levers ibukeka imangalisa ngemigca yayo ngqo kunye noyilo lwe-ergonomics. I-levers zenziwe ngokufanelekileyo ngokobukhulu ezenza ukuba zilungele ukulawula kwaye zikhululekile ukujika. Ungasebenzisa ii-levers ngomzamo nje omncinci kwaye ulawule ukuhamba kwamanzi ngendlela engagungqi. Ngaphandle koko, isitovu sokuhlambela ngokwaso sinokujikwa sibe ngama-degrees angama-360 ngokupheleleyo, ukuze sikunike ukonwaba okuphezulu ngelixa usebenzisa igumbi lokuhlambela, okanye ngelixa ucoca igumbi lokuhlambela lakho.
Ibhobho yokuhlambela yesilivere enezibambo ezi-2 ibonelela ngesipili esifana ne-chrome. Le nto ibizwa ngokuba yindlela engento ilungile kwaye ke kufanelekile ngakumbi kuyo nayiphi na imihombiso yanamhlanje yokuhlambela. Oku chrome igumbi lokuhlambela yayikhazimliswe kancinci ukunika umnxeba ochukumisayo kule faucet yombhobho chrome 2 izibambo. Inxalenye ebengezelayo ye-chrome yancitshiswa kancinci ukubonelela ngenkangeleko ekhethekileyo. Njengoko ubona, iWOWOW ijonge iindlela ezahlukeneyo zokwenza ihombiso yakho yokuhlambela ikhetheke kwaye yahlukile.
Indawo yokuhlambela ekumgangatho ophezulu kwigumbi lokuhlambela itawuli chrome 2 izibambo
Izinto ezisetyenziswayo kwisibhobho sokuhlambela i-chrome 2 ephatha i-WOWOW ngokuqinisekileyo ziphezulu kwintengiso. Kusetyenziswa izinto zentsimbi eziqinileyo kuphela njengentsimbi engenasici, ubhedu kunye ne-alloy alloy. Oku kuqinisekisa umgangatho ophakamileyo kunye nonyamezelo lobomi obude. Ezi zinto zenziwe ngesinyithi ngokuqinisekileyo zingaphezulu kwemigangatho yoshishino ngokubanzi. I-WOWOW isebenzisa izinto ezisemgangathweni ezingcono kunezinye ze-A-brand ezaziwayo kwimarike. Ngezi zinto zenziwe ngesinyithi ezihlala ixesha elide, i-WOWOW iqinisekisa ukuba itompo yangasese ye-chrome 2 handles ayiyi kwaphulwa. Ingakumbi isinxibelelanisi sobhedu, isiseko sobhedu kunye namandongomane obhedu enza ubunye bemanyano obuqinileyo kunye nokubola. Ngaphandle koko, ezi zixhobo ziqinisekisa ukuba
khusela umgangatho wamanzi ke ngenxa yoko impilo yakho neyosapho lwakho.
Igumbi lokuhlambela nge-WOWOW lokuhlambela nge-chrome 2 izibambo ziza nesincomo sokuvula amanzi. Ngale ndlela unokuyila isinki yakho yokuhlambela njengobunye. Indawo yokumisa amanzi ephuma phezulu inokusebenza ngokuthinta kancinci umnwe wakho. Ngale ndlela unokuvumela onke amanzi ukuba ahambe ngokulula. Kwaye ngaphandle kwengxolo ephazamisayo ngenxa yoyilo lwayo.
Isiphatho sokuhlambela esingenamngcipheko sombane i-chrome 2 izibambo
I-aerator ye-Neoperl ekumgangatho ophakamileyo ikubonelela ngokuhamba kakuhle nokuthamba kwamanzi. Ngenxa yolawulo lokuhamba kwamanzi okutsha, uya kukhululeka kukutshiza amanzi njengoko usebenzisa itampu yakho yangasese. Njengoko yayiyilwe ngobuchule, ikwasindisa ngaphezulu kwama-50% osetyenziso lwamanzi. Ke ngoko uya kuba nakho ukunciphisa iindleko zakho zamanzi kunye ne-WOWOW's bathroom faucet chrome 2 handles. I-aerator yeNeoperl iyafumaneka kwaye inokucocwa ngokulula okanye itshintshwe nguwe.
Njengoko i-WOWOW ikunika elona xabiso liphezulu lemali ngesibambo sayo sentsimbi chrome 2 handles, siqinisekile ukuba sikunika ixesha leminyaka emi-3. Sibonile abathengi abaninzi ababuyayo bethenga iipompo zethu zangasese kwakhona, kwaye le faucet isetyenzisiwe kwiindawo zikawonke-wonke. Ke ngoko iinjongo zethu zomgangatho ophezulu ziqinisekiswa ngabathengi bethu behlabathi. Ugqunywe sisiqinisekiso sokubuyiselwa imali seentsuku ezingama-90 xa uthenga itephu yethu yangasese. Ukuba awuyi kuqinisekiswa ngumbhobho wokuhlambela i-chrome 2 handles, uya kufumana imbuyekezo epheleleyo ngaphandle kwemibuzo ebuziweyo. Ke ungathenga itampu yethu yangasese chrome 2 ephatha i-100% ngaphandle kwengozi!
Izinzuzo ze chrome yangasese faucet Izibambo ezi-2 ngamafutshane:
 Yenza ifenitshala yegumbi lokuhlambela eyakhiwe ngokufanelekileyo
 Ifowuni eyingqayizivele ye-chrome ephathwayo
 Yenziwe ngezinto ezinkulu zobhedu
I-SKU: 2320300C iindidi: Ukusasazeka kweeMpompo zegumbi lokuhlambela, Ukuhlamba igumbi lokuhlambela tags: Umgangatho waseMelika, bamba banzi, Izibambo ze-lever
11.14 x 10.2 x 3.27 intshi